Daraasad la yaab leh CDC ayaa hadda lagu sii daayay waxtarka tallaalka COVID-19
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Caafimaadka Warka » Daraasad la yaab leh CDC ayaa hadda lagu sii daayay waxtarka tallaalka COVID-19
Xogtu waxay muujinaysaa in tallaalku bixin karo difaac sare, ka sii adag, oo joogto ah si dadka looga ilaaliyo cusbitaalka COVID-19 marka loo eego infekshanka oo keliya ugu yaraan 6 bilood.
Maanta, CDC daabacay cilmi cusub oo xoojinaya in tallaalku yahay ka hortagga ugu wanaagsan ee COVID-19. MMWR cusub oo baadhaysa in ka badan 7,000 oo qof oo ku kala nool 9 gobol oo cusbitaalka la dhigay xanuunka COVID-la mid ah, CDC waxay ogaatay in kuwa aan la tallaalin oo dhawaan qaaday caabuqa ay 5 jeer uga dhowdahay inay qaadaan COVID-19 marka loo eego kuwa dhowaan si buuxda loo tallaalay. oo aan hore u qabin caabuq.
"Hadda waxaan haynaa caddayn dheeraad ah oo dib u xaqiijinaysa muhiimadda tallaallada COVID-19, xitaa haddii aad hore u qaadday caabuq. Daraasadani waxay wax badan ku kordhinaysaa jidhka aqoonta muujinaysa ilaalinta tallaalada cudurrada daran ee COVID-19. Habka ugu wanaagsan ee lagu joojin karo COVID-19, oo ay ku jiraan soo bixitaanka noocyo kala duwanaansho ah, waa tallaalka COVID-19 oo baahsan iyo ficillada ka hortagga cudurrada sida xirashada waji-xidhka, gacmo-dhaqashada marar badan, fogaansho jireed, iyo joogitaanka guriga markaad jiran tahay, "ayuu yidhi. CDC Agaasimaha Dr. Rochelle P. Walensky.
Daraasadu waxay eegtay xogta Shabakadda VISION oo muujisay dadka qaangaarka ah ee cusbitaalka jiifa oo leh astaamo la mid ah COVID-19, dadka aan la tallaalin ee hore u qabay caabuqa 3-6 bilood gudahood waxay 5.49 jeer uga dhowaatay inay qabaan shaybaadhka la xaqiijiyay COVID-19 marka loo eego kuwa si buuxda u qabay. lagu tallaalay 3-6 bilood gudahooda tallaalada mRNA (Pfizer ama Moderna) COVID-19. Daraasada ayaa lagu sameeyay 187 isbitaal.
Tallaalada COVID-19 waa badbaado oo waxtar leh. Waxay ka hortagaan jirro daran, isbitaal, iyo dhimasho. CDC waxay sii wadaa inay kula taliso qof kasta 12 iyo ka weyn in laga tallaalo COVID-19.